Tsy hafa manoatra amin’ny orinasa vahiny ny orinasa malagasy. - Madagascar Informations
Tsy hafa manoatra amin’ny orinasa vahiny ny orinasa malagasy.
27 décembre 2016 28 juillet 2017 Madagascar Informations Aucun commentaire
Tsy misitraka ny tombotsoa tokony ho azony ny orinasa Malagasy manoloana ireo orinasa vahiny. Betsaka loatra hoy Rtoa Bakoly Razakanavalona ireo orinasa vahiny mandraraha eto amintsika ka hany ka lasa anjorombala ny orinasa Malagasy izay tokony ho jereny fanjakana akaiky.
Raha eo amin’ny sehatrin’ny jono fotsiny ohatra dia betsaka ireo orinasa vahiny manao io asa io kanefa maro ireo no tsy manara-dalana izay mifanohitra tanteraka amin’ny orinasa Malagasy.
Mbola ankamantatra arak’izany ny sehatra fandrarahana mikasika ny jono ho an’ny taona ho avy satria betsaka loatra ireo mpifaninana.
Fa anisany orinasa tsy manadino ireo mpiasa ao aminy isakin’ny fetiny krisimasy ny orinasa Manda Sa ,tsy ny mpiasa sy ny vady aman-janany irery anefa no jereny tale jeneraly ny orinasa fa ireo zokiolona eny amin’ny manodidina ny orinasa ihany koa .
Androany faha 23 ny volana dec no daty voatondro hizarana kilalao ho an’ny zanakin’ny mpiasa sy hanomezana fanomezana ho an’ny zokiolona izay nafanaina mpanakanto malaza maro toa an’ny Black Nadia sy tonton Jess.
ankoatra izay dia nisy ihany koa ny fiaraha misakafo izay notanterahana niaraka taminy fianakaviambe ny orinasa Manda Sa.
← Manohana akaiky ny tanora ny ONG Madasun sy ny Cnaps
Farany taona miavaka miaraka amin’ny Espace Nambinintsoa sy ny Art Gout Hotel Restaurant →
5 avril 2016 Madagascar Informations 0
Maro azo hisafidianana ireo sampampam-pianarana eto amin’ny INSPNMAD
11 septembre 2017 Madagascar Informations 0